Amin’ny alahady izao, ny 7 jolay, no hanatanterahana an’ity “carnaval” ity etsy amin’ny lapan’ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina, manomboka amin’ny 2 ora tsy diso. Hihazo an’Anosy, Analakely, Antanimena, Ankorondrano ny “Carnaval”, ary hiverina eo Mahamasina indray. Nambaran’ny mpikarakara fa maitso, fotsy ary mena ny fanamiana hanaovana. Ireo mpikambana anaty vondrona mpankafy “moto” sy marika “moto” manokana toy ny SGT, TEAM Glide, ary ireo “team” maro na manana “moto” fotsiny no antsoina amin’izany. Nanentana ireo ho tonga ihany koa izy ireo mba hitondra vovozela, sainam-pirenena, “siflet”. Marihina fa amin’ny alahady amin’ny 7 ora hariva no lalao manaraka hifanandrinan’ny Barea amin’i Congo.